Iyo British Shorthair katsi | Noti Katsi
Monica sanchez | | Katsi, Inobereka
The cat Britain Shorthair Icho chisingaenzaniswi chizvarwa chemakadzi: anodakadza kwazvo, anotamba, akangwara, ayo zvakare anonakidzwa noutano hwakanaka. Chitarisiko chaanacho chinonakidza, uye ndechekuti ane maziso mahombe anokwanisa kupfava moyo wako nekungovatarisa.
Kana iwe uchitsvaga katsi yekumba yekushandisa yakawanda uye inonakidza nguva nayo, yeBritish Shorthair inogona kunge iri shamwari yauri kutsvaga.
1 Kwakatangira uye nhoroondo yeBritish Shorthair katsi
2.1 British Shorthair Bhuruu
2.2 British Shorthair White
3 Hunhu hwako wakadii?
4 British Shorthair kuchengetedza
6 Mari yakadii yeBritish Shorthair inodhura?
6.1 Unogona here kuwana yeBritish Shorthair katsi dzekurerwa?
7 British Shorthair katsi mifananidzo
Kwakatangira uye nhoroondo yeBritish Shorthair katsi
Wedu protagonist anobva kuUnited Kingdom, sekuratidzwa kwezita rake; Zvisinei, makati epamba eRoma ndiwo madzitateguru avo. Ndiro rudzi rwekaresa rweChirungu rwunozivikanwa, uye imwe yeaya anomutsa rukudzo nekuyemurwa pakati peavo vanofarira katsi. Munguva yakapfuura yaishandiswa kudzora vanhu vemakonzo, asi munguva pfupi yakawana kuvimba kwevanhu, sezvo zvakazove zvakavimbika kwavari.
Kunyange zvakadaro, pakanga pasati pari kutozosvikira muzana ramakore rechi XNUMX apo kubereka kwokusarudza kwakatanga. Muna 1871, veBritish Harrison Weir, vakaita chidzidzo pamusoro pechirudzi ichi zvichibva pane katsi dzakaratidzirwa kekutanga kuThe Crystal Palace muLondon. Chiratidziro umo akawana vazhinji vanoyemura. Yaive ipapo iyo yakatumidzwa zita rekuti British Shorthair kuti isavakanganise nekati yekumabvazuva kana Angora.
Pakati pehondo mbiri dzepasirese, rudzi rwacho rwakanga rwave pedyo nekutsakatika, kuitira kuti varununure vaifanira kutsvaga kune vamwe, senge katsi yePezhiya., kuyedza kuidzosa. Iyi michinjikwa yakakonzera katsi ine musoro wakakomberedzwa, makumbo akasimba uye rakanyanya ziso ruvara, kuwedzera kune bvudzi refu rePersia. Zvakatora mamwe makore mazhinji ekusarudzira kusanganisa kubvisa hunhu hwekupedzisira uhu, kupatsanura katsi dzeBritish dzakapfupika kubva kune dzakareba.
Iyi imbwa ine makumbo mana ine hura, inorema 6 kusvika ku8 kg, imhuka inozivikanwa nekuve nemusoro muhombe nenzeve dzakakomberedzwa. Iwo ekupedzisira akaparadzaniswa zvakanyanya, uye ane chimiro chechetatu. Iwo maziso akakura, erudzi rwakanyanya.
Muviri wake wakasimba uye wakasimba, Inodzivirirwa nejasi pfupi, rakakora uye rakapfava iro rinogona kunge riine chero ruvara (chena, dema, bhuruu, tsvuku, tricolor, chokoreti, sirivheri, goridhe, lilac, sinamoni, fawn, bicolor). Kunyangwe hazvo mhando dzese dzakanaka, iyo yeBritish Shorthair bhuruu uye yeBritish Shorthair chena ndiwo maviri eanonyanya kufarirwa. Uye hazvisi zvezvishoma: kutaridzika kwake, kwatova kwenhema, kunoshamisa. Kana iwe usingatendi kwandiri, ngativazivei zvishoma.
British Shorthair Bhuruu
Iyo yeBritish shorthair yebhuruu katsi ine peculiarity yekuti ine maziso eakanaka, akasimba kwazvo orenji kara, iyo inoipa iyo inotapira uye yakapfava chitarisiko.
Mufananidzo - Cat Inobereka Encyclopedia
Iyo pfupi yeBritish Shorthair katsi chena inotonyanya kushamisa kana zvichibvira, sezvo inogona kuve nemaranjisi kana maziso ebhuruu, kana rimwe rerimwe bvudzi, uye iine chena bvudzi, kutaridzika kwayo kunokwezva kutarisisa kwakawanda.
Hunhu hwako wakadii?
Hunhu hweiyi yakakosha katsi inoshamisa. Iye ane rudo, anotamba, anofara. Anoda kuva nemhuri, zvisinei nezera renhengo dzayo, uye anowanzo fambidzana zvakanaka nedzimwe mhuka (katsi nembwa) futi.
Chinhu chega "chisina" chataigona kutaura ndechekuti inoenderana zvakanyanya kupfuura dzimwe kati. Haafarire kupedza nguva ari ega, uyezve, zvingangoitika kuti anozopedzisira atiteverera mumba mese uye kuti haadi kutiparadzanisa nesu kwechinguva. Kune vamwe vese, ikati yakanaka kuva mufurati kana imba, nekuti inochinjika mushe sekunge nguva yakatsaurirwa kwairi.
British Shorthair kuchengetedza
Iyo yeBritish shorthair katsi, senge katsi dzese, inoda mvura yakachena uye yakachena, chikafu chemhando yepamusoro (isina zviyo kana ne-zvigadzirwa), uye kukwesha kwemazuva ese kudzivirira kuumbwa kwevanotya mvere dzemvere. Asi kwete izvozvo chete, asi nguva nenguva tichafanirwa kuenda naye kun'anga, kungaisa iyo majekiseni anodiwa, for castrate / spay uye pese patinofungidzira kuti ari kurwara.
Kunyangwe izvi zvisina kukwana. Sezvatakambotaura, zvakakosha kushandisa nguva, tamba naye, tarisa terevhizheni naye, nezvimwe. Iye anoshanda zvikuru uye anoda kufamba, kurovedza muviri. Neichi chikonzero, kuti uve anofara uye akagwinya, iwe unofanirwa kupira matatu kana mana mapfupi zvikamu pazuva, zvinogara zvinosvika maminetsi mashanu imwe neimwe. Muzvitoro zvezvipfuyo tichawana zvisingaverengeke matoyi ekatsi nazvo tichava nenguva yakanaka.
Kunyangwe iri mhando yakagwinya kwazvo, inogona kuve nezvirwere izvi:
Feline coronavirus: Inotapurirana nehutachiona hwekorona hunorwisa zvakanyanya maseru emukati wekati, zvichikonzera kugadzikana kana kusingaperi gastroenteritis.
Feline panleucopeina: chirwere chehutachiona chinotapukira zvikuru chinokonzerwa neparvovirus iyo inonyanya kurwisa katsi diki dzisina kubayiwa, zvichikonzera zviratidzo zvakaita sekurutsa uye manyoka ane ropa, kurasikirwa nechido uye fivhiri.
Hypertrophic cardiomyopathy: chirwere chemajini. Izvo zvinokonzeresa kuwedzera kweiyo myocardial mass yeiyo kuruboshwe ventricle, zvichikonzera kushomeka muyekutenderera system.
Polycystic itsvo chirwere: inozivikanwa nekuvapo kwema cysts muitsvo anodzvinyirira munyama uye kudzivirira itsvo kushanda nemazvo. Kana kati iine chirwere ichi, inozove nezviratidzo zvakaita sekushaya nzara uye huremu, kurutsa, kushaya runyorwa, uye kuwedzerwa kushandiswa kwemvura (izvo zvinoita kuti iite weti zvakanyanya).
Mari yakadii yeBritish Shorthair inodhura?
Kana iwe wakatsunga kuwana mbwanana yerudzi urwu runoshamisa, iwe unofanirwa kuyeuka kuti mutengo uri pamusoro 500 euros.
Unogona here kuwana yeBritish Shorthair katsi dzekurerwa?
Zvakaoma. Kuve wakachena rudzi, uye zvakare unofadza kwazvo, zvakajairika kuti hapana kugamuchirwa. Asi hazvireve kuti havawanikwe. Muchokwadi, kana iwe uchinyatsoda kugara nekatsi yerudzi urwu, tinokurudzira kushanyira kana kutaura nemasangano uye dzimba dzekuchengetedza mhuka, pamwe nevekennels munharaunda yako.
British Shorthair katsi mifananidzo
Pano tinobatanidza zvimwe:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Iyo yeBritish Shorthair katsi
Mutengo uri mukennel wakakomba wakakwirira kupfuura € 500, asi iwo mhando haina chekuita nezvakatengwa pamutengo iwoyo kana wakaderera. Vakandinyengera ndokutengesa katsi kwe € 450, pakupedzisira yakanga isiri yeBritish (yaive grey katsi), yairwara, isina chizvarwa ... aifanirwa kuiswa muchipatara uye pakupedzisira akafa, isu takave nguva yakaipa kwazvo. Pakupedzisira takatendeukira kune ASFE cattery uye zvese zvaive zvakanaka, yakanaka uye ine hutano katsi.
Jose Antonio Campos Gonzalez akadaro
Ndekupi kwandingawane iyo british kitten keti ndapota ndinokutendai
Pindura José Antonio Campos González
Mhoro José Antonio.
Tinokurudzira kuti ubvunze kukiriniki yezvipfuyo. Zvimwe vanogona kukubatsira.
Scottish Fold, iyo katsi ine inotapira maziso